CadExplorer, raadi oo beddel faylasha CAD sida Google - Geofumadas
Maarso, 2011 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Microstation-Bentley
Marka ugu horeysa waxay u egtahay iTunes for AutoCAD. Ma aha, laakiin waxay u muuqataa inay tahay qalab lagu dhisay fikrado sida hal-abuureed iyo hawlaha ku dhow sida Google.
CadExplorer waa codsi fududeynaya maareynta xogta oo leh faylasha AutoCAD (dwg) iyo Microstation (dgn). cadayn, shirkadda soo saartay waxay leedahay barnaamijyo kale, laakiin aan aragno waxa igu qabsaday fiiradayda:
Waa mashiinka raadinta khariidada
Waxaan isticmaalaa si loo raadi style Google Gmail ma uu ogayn meel mail laakiin waxaannu xusuusan nahay laba qof oo ah erayada, qori iyo hore u leedahay liiska emails in uu noqon karaa mid aan u baahanahay.
Waa hagaag, ee macquulka ah ee xog la, CadExplorer ka dhigi kartaa bandhigay tabular iyo files carrousel u qaabeysan, aragto sida thumbnail. Waxaa la files DGN iyo billabo ka shaqeeyaa, waayo, qasti kasta oo dib u eegista aan gelinayn ahay in parentheses magacyada u dhiganta, waayo, dadka isticmaala MicroStation:
Qaybta ay ku kaydsan yihiin
Imisa laybarasho (Moodooyinka)
Imisa layash (heerarka)
Intee le'eg ayaa qariirad kastaa leedahay?
Xataa, waad ogaan kartaa nooca dwg / dgn ee la keydiyay iyo taariikhda la bedelay. Wanaagsan, ka dibna waxaad kuxirin kartaa madaxa madaxa.
ka la geeyo reebo, waxa laga yaabaa in search gaar ah, waayo, mid ama ka badan oo files in la kulmo xaalad, tusaale ahaan kuwa 2007 format version billabo; feylasha leh waxyaabaha ugu badan ee gudaha, sida si loo xaqiijiyo kuwa ugu badan ee miisaamaya; kuwa lagu soo hagaajiyo 11 ee Maarso iyo 25 ee Maarso ee sanadka 2007, iwm.
Tan ka sarreysa, CadExplorer ayaa baari kara gudaha faylasha waxyaabaha sida:
Blocks (unugyada), sida haddii aad rabto inaad ogaatid inta xaashiyood ee loo yaqaan "sariir" ay ku jiraan faylasha 35.
Qoraalka, sida kiiska oo raba in uu helo qaylo cad oo gaar ah.
Geometries sida wareegyada, xariijinta ama xuduudaha (muuqaalo) leh santuuqyo sida nooca xariijinta, dhumucda, midabka, lakabkaheerka), IWM
Baadhitaanku ma aha oo kaliya oo ku salaysan magaca, laakiin sidoo kale sharaxaad, sifooyinka ama calaamadaha sida boogaha, tixraacyada dibadda iyo habeynta (Moodooyinka).
Marka sheyga dulsaar la helo, waxaa suurtagal ah in lala socdo sheyga qaab muuqaal ah. Markaas waxaad sidoo kale furi kartaa feylka, waayo, waxaa laga yaabaa in dabcan AutoCAD ama Microstation.
Muuqaalkan ama raadinta tifaftiran waxaa loo samayn karaa warbixinta, loo diro Excel ama lagu kaydiyo sida smartview, nooc raadin ah oo lagu kaydiyo su'aal hal-tiirin ah.
Waa tifaftire ballaaran
caddaymaha u malaynaysaan odhan faasaska heerka loo yaqaan "faasas", iyadoo 0.001 cas oo dhumucdiisuna iyo qoraalka tilmaamay faasaska waa in uu noqon doono Arial la size a of 1.25. Waxaan leenahay mashruuc wixii aannu ku kala takoori shaqada ee files 75, kuwaas oo qaarkood ay leeyihiin heerka in, qaar ka mid ah ma, qoraalka ayaa laga yaabaa in xaaladahan laakiin garan mayno iyo suurto gal badan u baahan tahay xaqiijinta iyo / ama la qabsiga isbedelka in.
CadExplorer waxaa loo sameeyay sidan oo kale, samee isbeddel weyn si faylasha CAD ah. Waa wax weyn waayo, tayada, kaliya dooro lakabka loo yaqaan "dhidibka" codsan kartaa isbeddelka in files oo dhan hal mar.
Waxaad sidoo kale raadin kartaa qoraalka oo beddeli kartaa ama isku-dhafan oo ku saleysan calaamadaha ama hadallada joogtada ah. Xalka ugu fiican si aad u xalliso dhibaatooyinka ku xadgudubka heerarka (CAD-Heerarka)
Aalad weyn, hubaal. Marka laga reebo muuqaal wanaagsan, shaqeynta CadExplorer waxay u muuqataa mid waxtar leh. Markii hore ayaan soo xusuusan arkayn intii files Microstation, laakiin hadda ka hawl isku mid u ah files AutoCAD eegin version. Nidaamka ugu dambeeyay wuxuu ku shaqeeyaa Windows 7 waxaa ku jira 64.
Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad la xiriiri kartaa bogga internetka cadaynama raac via Facebook sababtoo ah marwalba waxay sameeyaan dibadbaxaad online ah.
Post Previous«Previous CAD dhawaado GIS ah | GeoInformatics March 2011
Post Next Companion samaynta ee, complement weyn oo Civil 3DNext »